XOG+DAAWO: Faroole, CC Sharmaake, Gaandi & Jeneraalo kulan xasaasi ah la yeeshay Axmed Madoobe.
KISMAAYO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes wuxuu ogaaday kulan gaar ah oo Kismaayo kudhexmaray xubno horey saameyn ugu lahaa asaaskii Jubbaland, kuwaas oo ay ka mid yihiin Senator iyo siyaasiin horey xilal sare uga soo qabtay Soomaaliya, ayna kulankaas la yeesheen Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Siyaasiintan ayaa kala ah Ra`iisulwasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Wasiirkii hore ee gaashaandhiga Soomaaliya Prof Maxamed Cabdi Gaandi, Jeneraal hore Axmed Xaashi, dhammaantood hadda waxay katirsan yihiin Aqalka Sare iyo Aqalka hoose ee baarlamaanka Faderaalka.
Kulanka oo saacado badan qaatay, waxaa laga wada hadlay sidii kama dambeys wax kasta oo kasocda Jubbaland u noqon lahaayeen kuwa lagu dhabar-jabiyo damaca dalalka deriska ah, gaar ahaana Itoobiya oo hadda xooga saaraysa arrimaha Jubbaland.
Xogta aan helnay waxay sheegaysaa in ay dhinacyadan isku soo qaadeen suuragalnimada in cid kasta oo isku dayda in ay ammaan darro ka sameyso Kismaayo ay mudan tahay in ay cadaaladda dhadhamiso, waxaana si wadajir ah ula kulmi doonan ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan Soomaaliya.
Siyaasiintan oo socdaalkooda Kismaayo ahaa mid qarsoodi ah ayaa kulamo kala gedisan la yeeshay qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka oo ay kala hadleen sida loogu baahan yahay isku duubni iyo midnimo in la muujiyo, iyadoo laga durkayo wax kasta oo keenaya dhaawac iyo dibu noqoshada Jubbaland.
Sidda muuqata xubnahan waxay dadaal ugu jiraan sidii dawladda Faderaalka Soomaaliya loogu jabin lahaa doorashooyinka Jubbaland, waxayna dadaal badan galinayaan in uu meelmar noqdo qorshaha doorashada ee Madaxweynaha Jubbaland horey u dajiyey, waxaase ku foogan halisyo waa weyn.
Sawirka waxaa ka muuqda General ilkajiir ee Axmed Xaashi kama muuqdo